Ogaden News Agency (ONA) – ISBAHAYSIGA DADADKA XORIYADA IYO DIMUQRAADIYADA (PAFD) Qaraarka Shirwaynaha 1aad ee PAFD
ISBAHAYSIGA DADADKA XORIYADA IYO DIMUQRAADIYADA (PAFD) Qaraarka Shirwaynaha 1aad ee PAFD
ISBAHAYSIGA DADADKA XORIYADA IYO DIMUQRAADIYADA (PAFD)
Qaraarka Shirwaynaha 1aad ee PAFD
Taariikhda: March 25, 2016 Tirada Tixraca: RES01 / PAFD / 2016
Waxa uu Isbahaysiga Dadadka Xoriyada iyo Dimuqraadiyada (PAFD) si guul leh ku qabtay Shirwaynihiisii Guud ee koowaad inta u dhaxaysay March 21 ila March 25, 2016 isaga ka dhacay Asmara, Eritrea. Shirwaynaha ayaa si faahfaahsan uga wada hadlay xaalada wadareed ee halgan, gaar ahaan xaalada ka jirta Itoobiya, kuwa Geeska Africa iyo dunida.
PAFD waa isbahaysi siyaasadeed oo u midaysan halganka lagu xoraynayo dadadka ku dulman Itoobiya, lana abuuray October 23, 2015 oo ay caasimada Norway, Oslo ku dhiseen shan urur siyaasadeed oo kala duwan oo ku kala magacaaban – Dhaqdhaqaaqa Xoraynta Dadka Benishangul (BPLM), Dhaqdhaqaaqa Xoraynta Dadka Gambela (GPLM), Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeenya (ONLF), Jabhada Xoraynta Oromada (OLF), Jabhada Wadaniga Xoraynta Sidama (SNLF) iyo wakiilada haweenka iyo dhalinta. Wax ka go’an Isbahaysiga in uu xididada u siibo taliska laga-tirada-badanyahay ee dulmiga ah si loo sugo, loona hor-u-mariyo xuquuqaha dadadka raba in ay fuliyaan aayo-ka-talin dhab.
Xaaladda Boqortooyada Itoobiya maalinba mida ka dambaysa ayay ka sii daraysa halkaas oo ay xukumada Itoobiya ee ay hogaaminayso TPLF/EPRDF ka fulinayso guryo-ka-saarid, handadaad iyo xidhid shacab aanan la marinin hanaan garsoor sharci iyo sii xoojin dilal badheedh ah.
Ciidamada iyo hayadaha amaanka ee dawlada ayaa rasaas ku furaya Dad nabad ku banaanbaxayal ah dalka intiisa badan si guud, si gaar ahna degaanka Oromiya. Dafiraada xuquuqaha siyaasiga ah ee dadka waxay u horseeday in ay kacdoomo balaadhan ka dhacaan qaybo kala duwan oo dalka ah si guud. Iyada oo isku dayaysa inay cabudhiso diidmada [banaanbaxayaasha] nabadaleh, waxay dawlada TPLF/EPRDF miciinsatay in ugu jawaabto rabintaanka dadadka nabadleh rabsho iyo sharciga xalada degdega ah.
Waxaa dheer, waxay jawaabteedu noqotay mid cad oo fulinaysay habab kala gedisan oo gumaad ah. Si la mid ah, waxay si joogta ah dadka xididada uga siibtaa dhulka ay u leyihiin isir ahaan iyada oo xoog xad-dhaaf ah iyo dilid-shacab anan waxba galabsan oo ay ku jiraan caruur iyo haween urleh. Iyada oo aanan loo eegin ka hor-jeedka xogaleh iyo dhaleecaynta caalamka ee ku aadan siyaasada sharci-darada iyo naxaris-la’aanta ah ee uu talisku adeegsanayo si u fuliyo siyaasada khalafsan isaga oo u adeegsanaya gargaarka caalamka hub-siyaasi ahaan.
Waxa uu talisku si wadaa u gefida xoriyada saxaafada, sharciga dhul wareejinta, soosarida khayraadka dabiiciga ah, hurinta colaadaha ka dhexeya qarabada iyo qawmiyadaha kala duwan si ay u hubiyaan in gacan–ku-haynta awooda.
Maqalka warbixinta gudiga ku–meel–gaadh ahaa ee laga qabtay kulankii aasaaska ka dib, waxay gudoomiyeyaasha shanta urur iyo ka qayb-galayaasha Shirwaynaha Guud ka wada hadleen, lana faalanqeeyay guulaha, liidashooyinka, fursadaha iyo halisyada jiri kara ee laga yaabo in ay Isbahaysiga soo food-saaran inta uu ku jiro falalkiisa hawlgal. Wada tashi ku saabsan waraaqaha aasaaska, mustaqbalka falaka siyaasadeed, diblomaasiyadeed iyo ciidaneed ka dib, waxa uu Shirwaynuhu ansixiay waraaqaha shaqeeya ee PAFD.
Shirwaynaha Guud ayaa sidaas oo kale ka hadlay, haykaleeyayna jihada mustaqbal ee Isbahaysiga ee ku aadan falalkiisa, siyayna tilmaamo cad gudigisa fulin iyo dhamaan waaxaha shaqo ee kale.
Shirwaynaha Guud ayaa sidaas oo kale doortay gudoomiye, laba gudoomiye–ku–xigeen, xubnaha gudiga fulinta iyo madaxa waaxaha shaqo oo kala duwan si ay u fuliyaan hawlaha Isbahaysiga. Kolka la qiimeeyay xaaladda hada ka jirta Boqortooyada Itoobiya, kuwa Geeska Africa iyo arimaha guud ee dunida ka dib, waxa uu Shirwaynaha Guud ee PAFD ku baaqayaa in:
Dadadka ka mid ah ururadanada xubnaha ka ah in ay shuruud la’aan ku midoobaan si ay isaga caabiyaan, una xoojiyaan halgankooda xaqa ah si ay u gaaraan xuquuqdooda laga-ma-maarmaanka ah ee ay uu diideen talisyada so taxnaa ee Itoobiya oo uu ku jiro mid kan [TPLF].
Taliska Itobiya uu shuruud la’aan joojiyo dilka shacabka aanan waxba–galabsan ee aanan hubaysnayn, xidhida aanan la marinin hanaan garsoor sharci iyo boobka khayraadka qaramada iyo dadadka dulma iyo go’doominta warbaahinta.
Ciidamada iyo aaladaha amaanka ay joojiyaan dilka shacabka aanan waxba–galabsan, waxaanu ku boorinaynaa inay u hiiliyaan dadka si loo afjaro taliska axmaqa ah ee TPLF/EPRDF.
Dhamaan ururada siyaasadeed ee boqortooyadiisa Itoobiya ay is-garab is-taagaan si loola dagaalamo xukumada kali-taliska ah si midaysan.Waxaa sii dheer, waxay PAFD casuumad u fidinaysaa dhamaan kooxaha mucaaradka ah ee u halgamaya xoriyad, cadaalad, sinaan iyo dimuqraadiyad inay si shuruud la’aan ah ugu so biiraan Isbahaysiga.
Beesha caalamka inay ixtiraamaan rabitaanada, hawooyinka iyo xuquuqaha dhamaan qaramada iyo dadadka ee Itoobiya oo ay joojiyaan taageerida xukumada kali-taliska ah inta aynan xalada jirta noqonin gebi ahaanba mid aanan la maamuli karin.
Waxa kale oo aanu waydiinayna beesha caalamka in ay saamayn culaysleh ku saaraan kuwa masuulka ka ah xasuuqinta shacabka aanan waxba–galabsan oo la keeno cadaalad.
Gebagebadii,waxa uu PAFD si adag u cambaaraynayaa isticmaalka sharci-darada ah ee gargaarka la siiyo dadka ku jira baahida weyn iyo kuwa ka hortaga ka inay siyaabo kale ku helaan iyaga oo ka xanibaya ganacsiga iyo dhamaan ilaha gaargaar samafal. Waxaa intaas si dheer, waxaanu cambaaraynaynaa baryootanka gargaarka loo adegsado ujeedooyinka siyaasada taliska oo ah kuwa abuuray ka barakicinta dadadka wadaniga dhulkoda hodanka ah iyo ku wareejintiisa shisheeye iyo maal-qabeenada taliska ku xidhan.
Nabad, Dimuqraadiyad, Xoriyad iyo Xuquuq dhab oo Aayo-ka-Tashi Dadad